ချိန်းတွေ့ ဗီဒီယို - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖို့မိုက်အတွက် နှင့်ဆောက်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါဦးဝင်း-ဝင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်တစ်ဦးကိုမျက်စိလှည့်ရန်စာချုပ်။ ဆိုက်အသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အပျိုစင်မိန်းကလေးများအတွက် နှင့်ဆောက်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါဦးဝင်း-ဝင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်တစ်ဦးကိုမျက်စိလှည့်ရန်စာချုပ်။
ချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ရုပ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအလိုလိုကိုတရုတ်လူမျိုးမှအစဉ်အမြဲနှင့်နေရာတိုင်းအတွက်ဖြစ်အုပ်စုကြီးတစ်စု လူ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထီးကျန်လယ်ဘုရင်နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။ သင်မိတ်ဆွေအများကြီးကဒီမှာ၊အလုပ်မှာ၊သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာ၊လမ်းပေါ်မှာဘယ်မှာသင့်အိမ်တည်ရှိပြီး၊အပေါ်လူမှုကွန်ယက်များမှာလူကြိုက်များနှင့်အတူတရုတ်လူငယ်။ သူတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုတူညီသောကြိမ်နှုန်းအဖြစ်ကြသောအခါထိုသူတို့အလုပ်လုပ်ရန်သွားပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေများမဆိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ကောင်းစွာ၊ဟုတ်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည...
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကို- ၂၁ အသက်အနှစ်၊ငါအားလုံးအတွက်အသေးစိတ်အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်ဤအတွက်၊သင် ၁၈ အသက်အနှစ်နှင့်နန်းတစ်စောင်ကို၊သို့မဟုတ်မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေချင်ငါ့အတွေ့ကြုံများ၏အဝတ်အစကနေကျွန်မအတွက်ဗစ်၊သူမအပြုအရာအားလုံးအဖြစ်ကတိထား၊ဆောင်ခဲ့ပြန်ဖို့သူမ၏ခင်ပွန်းအတွက်မိသားစု။သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်၊သောအကောင်းဆုံးအချိန်၊နေ့၊ကျွန်မရယ်၊ပျော်စရာ၊အားကစား ၂၇-နှစ်အရွယ်။ ၁၈၂ ၇၈ ၁၉ စေပါလိမ့်မယ်သင်ရှည်လျားနှင့် ၊ငါစောင့်ရှောက်မည်အားလုံးအကြံပြုချက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှာသင့်တောင်းဆိုချက်နှင့်...
ယခု၊အင်တာနက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊အများအပြားရှိပါတယ်သစ်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊အရာတဖြစ်ပါသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုများလိင်ချက်တင်။ ဒါဟာအကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်အတွက်အ နိုင်ငံများနှင့်အတူလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုယခုအရမ်းဘက်လိုက်တယ်။ ၏သင်တန်း၊ထိုအပြုသဘောအပြောင်းအလဲအတွက်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။၊ဒါပေမယ့်ခွဲခြားဆက်ဆံနေတုန်းပဲ။ ေဆက်ဆံရုရှားအတွက်၊ဘီလာရုစ်၊ယူကရိန်း၊ကာဇက်စတန်နှင့်အခြား နိုင်ငံများ၊အဆိုပါပြဿနာများ၏ဆက်သွယ်ရေးအလွန်သက်ဆိုင်ရာအမှန်၊ကလပ်အသင်းနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းထားရှိရေးကလူများန...
မိသားစုအမြို့မြို့ပေါ်တယ်ကမ်းလှမ်းဒေသခံများ၏မှတ်ပုံတင်ရန်သူတို့၏ပရိုဖိုင်တွင်ချိန်းတွေ့အပိုင်း။ ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့လူတွေမြို့မှ၊သငျသညျမတ်ေတာအတှကျရှာဖွေနေနှင့်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်။ သင်တို့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈ အသက်အနှစ်ရှာချင်တယ်မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ-ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳမိသားစု။ အဲလစ်၊သင်ရုံကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော။ အမြဲတမ်းနေထိုင်အတူပျော်ရွှင်စရာနှင့်ချို။ မော်ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်အသုံးပြုသူ၏ ။ ကောင်း၏အချိန်။ သင်သည်အကိုက်ညီဆုံး။ ကဗျာကောင်းပါတယ်။ အတိုချုပ်ထဲမ...
အသီးအသီးအလောင်းအစားတစ်ခုစဉ်းစားသည်ဝယ်ယူ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေသည်တိုးချဲ့အတွက်အချိန်ရှိနျလှနျကတည်းကနောက်ဆုံးဝယ်ယူ၏အလောင်းအစား။ အဖြစ်-အ၊သင်မြင်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လူတိုင်းအိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်၊သင်ပင်လျှင်။ မည်သူမဆိုစကားပြောနိုင်သည်။ ရင်းနှီးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၊အဖြစ်ဖိတ်ဖို့အခြားဆိုင်ချက်တင်အတွက်စက်ဝိုင်းတားမြစ်ကြသည်၊အကြောင်းအလယ်၊အကယ်၍မခံမကောင့်တစ်ခုမှအထက်ပါအပြောင်း။ လျှင်သင်ဤနည်းဥပဒေချိုးဖောက်စေခြင်းငှါ၊သင့်ရဲ့ကိုယ်အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းငွေအဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်အဖြစ်မှတားမြစ...
သူငယ်ချင်းတွေငျး၊ငါဂရုမစိုက်ပါဘူးမည်မျှသင်၊သင်ဘယ်မှာနေတယ်၊ဘယ်က်ားသင်ရှိသည်ပိုပြီးပြီ ၁၃၊ငါအသက်ရှင်၏မြို့အတွက် လျှင်၊သင်၌စိတ်ဝင်စားကြဤအလုပ်၊ငါ့အမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်၊သူတို့ပြောသကဲ့သို့ငါသည်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသူငယ်ချင်းများမှဖန်တီးမဟုတ်သော-သာမန်မိသားစုအျပင္ဘက္။ လင်နှင့်မယားနှစ်ဦး။ ငါအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်နေ့က၊ဒေသခံတစ်ဦး။ ဟိုတယ်ရဲ့အသေးစားကမ်းခြေနှင့်နီးစပ်သည်။ ကျွန်မဟာချစ်စရာ၊ငါဖို့ဘယ်လိုသိ။ ဂရုစိုက်၎င်း၏အကာအကွယ်။ နေသောမြို့အရေးမပါဘူးဒါကြောင့်အရေးမပါဘူ...
ငါအလိုဖြည့်ဆည်းသည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော၊ချစ်စရာသွယ်သောသူသင့်ကျေးဇူးပြုသောဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၊လွတ်လပ်သော၊ငါခဲတဲ့ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ မပျောက်မပျက်အစည်းအဝေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ချစ်ရသူ၊ပျော်ရွှင်မှုအတွက်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ငါအဘို့အရှာနေပါ။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတဲ့သူကလူများလက်သည်း၊နှင့်ဆွဲသို့သူတို့ကိုရွှံ့။ သငျသညျကိုသဘောတူလျှင်ကျွန်တော်နှင့်အတူ၊ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။
အားလုံးအချက်အလက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်စုဆောင်းနေဖြင့်ပွင့်လင်းနှင့်အများပြည်သူဒေတာအတွက်လူမှုကွန်ယက်ဇြန္လဲ့ေ။ အဆိုပါစီမံကိန်းများပါဝင်သည်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်လူကြိုက်များသောရေးသားချက်များမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ဆိုက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ၊တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်။ အားလုံးအချက်အလက်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်စုဆောင်းနေဖြင့်ပွင့်လင်းနှင့်အများပြည်သူအချက်အလက်များကိုလူမှုကွန်ယက်ဇြန္လဲ့ေ။ အဆိုပါစီမံကိန်းများပါဝင်သည်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်လူကြိုက်များ၏စာမျက်နှာများမှလူအပ...
ထိုအခါအမှန်တရားအကြောင်းသင်အတွက်အသက်ရှင် ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ပြောချင် နှင့်အတူတစ်ဦးချစ်စရာကိုးရီးယားသား။ ကောင်းစွာ၊အဘယ်သူသည်ချင်ပါဘူး၊ကျွန်တော်လည်းလိုသည့်အခါကျွန်မနေထိုင်ခဲ့ၼရုစ္။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသင်အဆင်သင့်၊စကားပြော၊နှင့်အဘယ်မှာသူတို့ကိုရှာတွေ့မှ၊ဒီကင္မ္ခ်ီ၊အများဆုံးမေးခွန်းများကို၊ကောင်းပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်မေးခွန်းတွေကိုအပိုင်းတွင်၊လေထုများ၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကိုဘယ်လိုအလာကိုရီးယား၊အဘယ်ကြောင့် ၅၀ ကျော်စေလွှတ်ရန်မည်သို့ဖြည့်ဆည်းကိုရီးယား၊နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏တူညီသောမေး...
ရီကနေတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းကင္မရာမ်ား၏စန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂိုကမ်၊အွန်လိုင်း၊ဥတု၊ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတင်းကနေစန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂို၊မြို့တော်၏ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေး။ အဆိုပါမြို့တော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ကိပ်ႏ မှ၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အထိ ၁၅၀၂အသစ်ပြောင်၊၁၉၃၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁။ လူဦးရေ၏စန်တိုဒိုမင်ဂိုရောက်ရှိတစ်သန်း။ ရီကနေတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းကင္မရာမ်ား၏စန်တိုဒိုမင်ဂို။ စန်တိုဒိုမင်ဂိုကမ်၊အွန်လိုင်း၊ဥတု၊ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သတင်းကနေစန်တိုဒိ...
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်များစွာသောအခြားသူများအလိုရှိသောကတ်။ ငါရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖောက်သည်များ၊နှင့်အတူနောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲအတွက်ကဒ်ကိုလက်ခံရရှိ။ မြေပုံအခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲရတဲ့အရ၊သို့သော်၊သင်အရှိန်မြှင့်၏နယ်စပ်ဖြတ်ကနေတဆင့်အထူးအလိုင်းစင်္ကြံ၊အလက်ရှိမြေပုံလိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ခရီးသွားလာ၊သို့မဟုတ်အထမ်းများရထား၊ေင္တာမ်ိဳး။ စင်ကာပူတွင်၊သင်တို့အတွက်တက်လက်မှတ်ထိုးမကြာခဏခရီးသွားအစီအစဉ်အပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူပ်သည့်အခါတင်ပြသည့်ပက်ကဒ်မှာအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းချက်။ ထို...
သစ်တစ်ခုဆောင်ပုဒ်သာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအမြစ်အစိတ်အပိုင်း။ ယခုမွစတင္၍ပြင်အိပ္ခ။ အတွက်ကြီးကြပ်မှု၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုအစီအစဉ်၏အစီရင်ခံ နှုတ်ခွန်းဆက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအကြပ်အခွေအသစ်အဗားရှင်းအစီအစဉ်၏၊ယခုပေါ်တွင်နှိပ်ပါအစီအစဉ်နာ့့နှမ်းတစ်ခွေ နှုတ်ခွန်းဆက်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအကြပ်။ ဒီအသင့်အတွက်။ အသောသူတို့အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊လူငယ်တစ်ဦးသည်လူ၊ကျွန်တော်ကစပ်စုပါ။ ဤသည်၏တစ်ဦးစကားလက်ဆုံ၏အစိတ်အဘို့အသောသူအတူပျင်းသောအထီးကျန်။ ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူသွားလာရန်ပေါ့ပါး။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်လုပ်နိုင်သည်။ သင...
ဝေးအားဖြင့်၊အများဆုံးရေပန်းစားရုရှားကစားတဲ့ဂိမ်း။ နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတည်ပြုချက် မိုလ်သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်နေ့တိုင်းအား ၂၀၀ ခန့်လူဦးရေသန်း။ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအတူကျော်ကြားသူတစ်ဦး:ငယ္လည္း ၊တို့၊၊ နှင့်ျဖင့္အခြားဘလော့ဂါများရေးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုများအတွက်ချက်တင်ကစားတဲ့မိတ်ဆက်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ။ ကစားတဲ့စကားပြော၊သင်လစ်စလစ်အတွက်၊ နှင့်စော်၏အပေါင်းအဘော်၊ဒါမှမဟုတ်သင်အလွန်အလျင်အမြန်နှင်အိပ္ခ။ သတိရ:ပေးဆောင်။ ကစားတဲ့စကားပြောခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးသမိုင်းအတွက်၊ဒါပေမယ့်အလျင်အမြန်...
ပုံသေထိအမှတ်အသား။ ဒီအထူးတည်နေရာအပေါ်ဘော့နှင့်အလိုအလျောက်ပေးပို့ကြောင်းကိုအချက်အလက်အရေအပူချိန်ကို။ သူတို့အများဆုံးတိကျမှန်ကန်နှင့်အစဥ္။ အပူချိန်အိုးတံဆိပ်အပေါ်အလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပါသည်ပေါ်အပျော်အပါးယာဥ္မ်ား၊နှင့်လမ်းအပေါ်၊ဤစစ်ဆေးရေးထွက်ယူသွားတတ်မှာအတိအကျအရေအပူချိန်တိုင်းမီတာ ၅၀၀။ နေစဉ်သင်္ဘောသည်စာရေးကိရိယာများ၊အချက်အလက်လက်ခံရရှိတိုင်း ၂ နာရီ။ သင်နှိပ်တဲ့အခါထိုမြေပုံပေါ်တွင်တံဆိပ်၊ကားဖုန်းများပြသထားသည်အားလုံးနှင့်အတူရေကိုအပူချိန်တိုင်းတာချက်များ။ သင်နှိပ်...
အိန္ဒိယသည်ပုခက်၊စွန်ပလွံစာဖတ်ခြင်း၊စစ်တုရင်နှင့်အမှန်တကယ်ရော။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ကလေးတိုင်းပထမဆုံးသိအမျိုးဖြစ်နှင့်စာနာ။ သင့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦးသည်ဟိန္ဒူ၊သူအတွက်ကူညီပေးပါမည်ခက်ခဲကြိမ်။ ငါ၏အိပ်မက်လေးတစ်ဦးအစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်။ တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်အဖော်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အိန္ဒိယအတွက်၊သင်မှတ်ပုံတင်ထားရမယ်။ ဒါဟာကြာအချိန်တစ်နိမ့်ဆုံးနှင့်မလိုအပ်ပါဘူးမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ဖြဖြေပေးတော်မူမည်၊သင်အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်မှအခြားရွေးစရာ။ ဤသင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ဖန်တီးရန်အ...
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊အမျိုးသားမသိခဲ့ရွာသဘောဆက်သွယ်ရေး။ ရှိပါတယ်လွန်းအများအပြားကြယ္ရာအတွက်ခေတ်မီလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကျော်လွှားရန်ခက်ခဲ။ အစည်းအဝေးတွင်တစ်ဦးကဖီးသို့မဟုတ်ရထားစဉ်းစားသည်ထူးဆန်းမှာ ပီးဆယ်ကျော်သက်သူထိန်းချုပ်မှုအဆက်မပြတ်၎င်းတို့၏မိဘများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အချို့လူတစ်ခုကိုရှာဖွေစီမံခန့်ခွဲမိန်းကလေးအတွက်ညဥ့်အခါကလပ်အသင်း၊ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောရှာကြာအချိန်နှင့်ငွေကို။ အားလုံးမဟုတ်လူအလုံအလောက်ရဖို့ပိုက်ဆံကျွမ်းနှင့်အတူတွေကတော့နှင့်အခြားအလားတူထူထောင်၊ဒီမှာရှိဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပန်းဖြေ၊အရာ...
အကြောင်းသိကောင်းစရာများ၏အကြောင်းသိကောင်းစရာများ:ဘယ်လိုစကားပြောသွားမဟုတ်ပါမပြု နိုင်ငံသားများ၏ခရီး၊အစုံဖတ်ထွက်ရှာဖို့ဒီအကြောင်း: ဥပဒေကဲ့သို့လူတစ်ဦးအတွက်စကားပြောခန်း။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှကြွေးကြော်ကြ"ငါ့ကိုကြည့်ရှု"သို့မဟုတ်"ငါ့အားပြောပြရန်"သတိပြုမိဖို့။ တူညီသောလမ်းအတွက်ဖြစ်၏။ ပင်ပိုကောင်း၊သင်ပွင့်ပြသရှေ့တော်၌စတင်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောနေတာ။ ကြိုးစားမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ဖိနပ်။ လူတစ်ဦးသင်အတွက်သတိပြုမိသည်။ မစောင့်ပါနဲ့သူတို့အဘို့အပြောဗြဟံ၊စကားပြောဖို့သူတို...
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်။ စစ္မစံသတ်မှတ်ချက်၌လက်ဝဲကော်လံ၊၊ရှာ၊အမိန့်မိန့်နဲ့အသစ်ခင္း(မက်စ်။ ႏွင့္)အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားနည်းပညာများအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏။ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ရန်သဘောတူကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သောအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်ထုတ်ပြန်ချက်။ ကျနော်တို့အနီးကပ်ကိုရှာဘို့။ စစ္မစံသတ်မှတ်ချက်၌လက်ဝဲကော်လံ၊၊ရှာ၊အမိန့်မိန့်နဲ့အသစ်ခင္း(မက်စ်။ ႏွင့္)အကြောင်းကြားလိမ့်မ...
ထိုမိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူသူတို့ရဲ့အသစ်ဖုန်း၊ဓါတ်ပုံတွေကိုယူပြီးသူတို့ကိုနေစဉ်သူတို့အဘို့ရှာကြသည်အချို့သောခေတ်မှီအဝတ်။ ဤဓါတ်ပုံလည်းအမြင်အပေါ်အချို့သောလူမှုကွန်ယက်နှင့်အဘို့တောင်း သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမဲ။ အောင်လှပသောပေါင်းစပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အတွက်ဗီရို။ ဘယ်လိုအကြောင်းတစ်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအစိမ်းရောင်တီရှပ်နှင့်အတူအဖြူအစက်နှင့်အတူတွဲပန္းေရာင္ေဘာင္းဘီပန္းေရာင္ေနကာမ်က္မွန္? ကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးကြော့အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံအပေါ်ပခုံးနှင့်အတူငယ်မောင်းထုတ်အပေါ်နှလုံးနှင့်မောင်း...
ကျနော်တို့ရှိသည်သောမျှော်လင့်ပါတယ်။ကြိုက်ဤတင်ဆက်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့အတင်ဆက်မှု၊သူတို့ကိုအကြံပြုပါသည်သင်၏မိတ်ဆွေများမှမည်သည့်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ။ သက်ဆိုင်ရာခလုတ်သင်အောက်တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးပါပဲ။ သင်နှိပ်နှင့်အတူအမှတဆင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်။ ဧရိယာတွက်ချက်ခြင်း၊လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအစီအစဉ်များအတွက် ၊အောင်ပွဲ ။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းကမ်း ဌာနအဆောက်အအုံနည်းပညာ ဆောက်လုပ်ရေး:တစ်ဦးအားကြီးဌာနမဏ္ဍပ်များအတွက် ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးစာရင်းအသစ်ပြင်၊အဆင်ရန်ကမ်းလှမ်းနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ် အတွက်အပြောင်းအလဲ၏အပြင်။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားမျိုးကွဲ၊အကြံပြုစာများ၏လိမ္မော်ရောင်သည်မီးမောင်းထိုးပြ။ ပထမ-ကွဲ၊သို့သော်၊အမှလုိုက်။ထောက်ခံချက်။ အကြံပြုထား၏စာလုံးပေါင်းမှားမှအကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာအပျိုသို့မဟုတ် နှင့်အမြဲလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကောင်စီ၏အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းသည်။ အသေးစိတ်အတွက်၊ရည်ညွှန်းသည်။ သင်ရှိသည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းဖို့အပလီကေးရှင်း၊အ...
ငါတို့ပြုသမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးလုပ်ချင်ရှာဖွေရန်သင်၏ခင်ပွန်း။ ငါတို့သည်ခေါ်မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူများနှင့်၊အမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော၊နှင့်ထိုနည်းလမ်းများကိုနှင့်နည်းလမ်းများ။ ကျနော်တို့နံနက်ယံ၌ထနိုးအသောက်ကော်ဖီသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်။ ကျွန်တော်အလုပ်သွား၊ကျွန်တော်သွားကောလိပ်၊သို့မဟုတ်ကျွန်တော်မလုပ်မှာအားလုံး။ ရပ်မှာမျဉ်းကြောင်း၊အလုပ်ဖုန်း၊အလုပ်ရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမှုများကိုနေ့တိုင်းနှင့်အရှာအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ကျနော်တို့ကွဲပြား...
How to MeetaGirl or A woman-Basic rules .
ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၁၈ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင် လွှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ချက်တင်ကစားတဲ့အနှစ် ချိန်းတွေ့ဆိုက် အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့အွန်လိုင်း